दशैं र रेमिट्यान्सको सम्बन्ध
दशैंको समयमा झन्डै ३० प्रतिशत बढीले आप्रवाह हुने रेमिट्यान्सले तथ्यगत रुपमा दशैं र रेमिट्यान्स वीचको अन्योन्याश्रित सम्बन्धलाई अझ गहिराइमा पुगेर बुझ्न मद्दत गर्नेछ। थोरै बैना लगाएर दशैं वा माघे सक्रान्तीको भाकामा भैँसी किन्ने ग्रामीण नेपाली समुदायको पुरानो प्रचलन हो। साहु ऋणी वीचको वाक्लो आवतजावत समेत यस्तै पर्व विशेषमा बढी हुने गर्थे। घरको छाना र बच्चाबच्चीको नाना फेर्ने मानवीय आधारभूत आवश्यकताका लागि समेत रेमिट्यान्स आप्रवाह हुने यस्तै सुखद अवसर प्रतिक्षा गर्ने गरेका हामी धेरै छौं।
देशको परम्परागत आर्थिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष जोडिएको रेमिट्यान्सलाई दशैँसँग मात्र जोडेर व्याख्या गरिनु संकुचित हुन्छ। यद्दपी, देशको बिद्यमान प्रतिकुल परस्थितिमा रेमिट्यान्सको आर्थिक गतिविधिले नागरिकलाई दशैँ मान्ने अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट थोरै भएपनि मुक्ति मिलेको छ। गत बैशाखको भूकम्पीय विनासले क्षत विक्षत तुल्याएका देशका उत्तरी नाकाहरु सुचारु हुन नपाउदै झन्डै ६६ प्रतिशत समान आयात हुने दक्षिणी नाका समेत विगत दुई महिनादेखि प्रभावित छन्। त्यसैमा थपिएको छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतको नाकावन्दीले दशैं मनाउने समस्त नेपालीलाई दशैँ साँच्चै दशा बनेर भित्रिएको छ।
परस्परमा मिलेर बसेको समुदाय नेपाल राष्ट्रको विशेषता हो, भलै यो परस्परीक सदभावलाई भत्काउने कैयन कुचेष्टा पछिल्लो समयमा किन नभएका हुन्। अहिलेको अभावमा साट्न मिल्ने चिज र वस्तुहरु साटेर दशैँ मनाउँदै गरेका कैयन नेपालीहरु भेट्न टाढा जानुपर्दैन, देशकै राजधानी काठमाडाैँ काफी छ।
दशैँको मौकामा भ्याइनभ्याइ यात्रु ओसार्ने ट्याक्सी चालक मेरो बुझाईमा सबैभन्दा बढी मर्कामा छन्। निर्वाध सडकमा गुडेर आफ्नो र परिवारको दशैँ मनाउनुपर्ने चालकहरु ट्याक्सीलाई पेट्रोल पम्पको दिनहुँ लामो लाइनमा राखेर श्रमका लागि प्रवासिएको आफ्नो साथीलाई ट्याक्सी भित्रैबाट फोन गर्छ ‘ओ हेर न ! तेल नभएर गाडी नै गुडाउन पाइएन, दशैँ मान्ने पैसा पठाईदे, गाडी गुड्न थालेपछि फिर्ता गरुँला’।
यो पछिल्लो प्रतिनिधि उदाहरणले सायद पंक्तिकारका समकक्षी सवैको वाल्यकाल ब्यूँतिएको हुनुपर्छ। कारणवश मुग्लान भएका आफ्ना आफन्तलाई यस्तो पर्व विशेषमा छुट्टी नमिल्दा नयाँ लुगा फेर्ने बाल – शुलभ हठ अधुरै रहन्थ्यो। ती ट्याक्सी चालकका बच्चाबच्चीलाई त्यो अभाव झेल्नु नपरोस् ! धन्य भन्नु पर्छ ! विदेशबाट पैसा आउनलाई अहिले मान्छे नै आउनु पर्छ भन्ने छैन। रेमिट्यान्स व्यवसाय संस्थागत भएको छ। गाउँगाउँमा रेमिट्यान्स वितरण गर्ने स–साना एकाईका वित्तीय संस्था बाक्लै खुलेका छन्। दशैँ मनाउने समाजका सदस्यको वित्तीय आवश्यकतालाई पूर्ति गर्ने विकल्पको रुपमा रेमिट्यान्सको आवश्यकता यस्तो प्रतिकूल परिस्थितिमा झन् बढी महसुस हुने रहेछ।
दशैं मनाउने मात्र होईन ईद, ल्होसार..आदि मनाउने नेपाली र हाम्रा निकट छिमेकी राष्ट्रका नागरिकको बैंकिङ्ग आवतजावत समेत मुलत यस्तै यस्तै पर्व विशेषमा बढ्ता हुन्छ। विगत पचास बर्षदेखि रेमिट्यान्समा आश्रित फिलिपिन्सका नागरिक रेमिट्यान्सको अभिन्न सम्बन्धमा जोडिएका छन्।
तसर्थ, रेमिट्यान्स समग्र एशियाली मुलुकका नागरिकका लागि मूलतः पर्व वा त्यस्तै तत्कालिन आवश्यकता पूर्ति गर्ने चल पूँजीको रुपमा प्रयोग हुदैँ आएको छ। त्यसो त वैदिशिक सहायता र रेमिट्यान्सको प्रयोग आपतकालीन मानवीय सेवामा उपयोग हँुदै आएको तथ्यलाई विश्व बैंकले समेत स्वीकार गरिसकेको छ।
सायद आर्थिक वर्ष २०६५÷६६ को दशैंमा हुनुपर्छ, राष्ट्र बैंकले पर्याप्त पैसा बजारमा उपलब्ध गराउन सकेको थिएन। पंक्तिकार रेमिट्यान्स सेवा प्रदायक एक प्रतिष्ठित कम्पनीको प्रतिनिधिको हैसियतले साउदीमा थिएँ। बजारमा नोटको भौतिक अभाव यस्तो प्रकृतिको जागिरमा तनाव बढाउने प्रमुख कारक हो।
जुन यस्ता उत्सवमा प्रायः दोहोरिन्छ। सेवा प्रभावित हुदा सेवाग्राहीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहनु पेशाको धर्म हो। त्यो समयमा कैयन सेवाग्राहीका गुनासा अनुभव गरेको छु, उनीहरुले भन्थे, ‘दाइ यो पैसा भएन भने मेरो परिवारको दशैं खल्लो हुन्छ’। हामीले गर्न सक्नेसम्मको काम गरेर दशैं खल्लो बन्न दिएनौं। यो समयमा रेमिट्यान्समा आश्रित नेपाली समुदायका धेरै पीडालाई प्रत्यक्ष अनुभव गर्न पाएको छुँ।
अहिले झन्डै ६० प्रतिशत घरधुरी रेमिट्यान्समा आश्रित छन् कम्तीमा ती परिवारको दशैँ रेमिट्यान्ससँग प्रत्यक्ष गासिएको छ। वस्तु बिनिमयले एकआपसमा मुद्राको परिचालन हुने स्वाभाविक संजालमा हामीले अवरोध सिर्जना गरेका छौं। सोलुखुम्बुका पाखा बारीमा फल्ने (बंगको) आलु अहिले निर्वाध तराई झर्न पाउँदैनन्।
त्यो पैसा अत्यावश्यक पर्ने वस्तु विनिमयमा खपत हुने हो तर, अहिले बजारमा ती वस्तु उपलब्ध छैनन्। पैसा हुँदाहुदै पनि समान किन्न पाइएन अब के गरौँ त ! सायद मान्छेले यसरी नै चित्त बुझाउलान्।
नेपाली युवा श्रमिकले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा पसिना बगाएर आर्जन गरेको रेमिट्यान्स बहुराष्ट्रिय कम्पनीका उत्पादनको खरिदका खर्चिन्छ। बहुराष्ट्रिय कम्पनीले आफ्ना उत्पादन बेचे वापत राज्यलाई कर तिर्छन्, देशको आर्थिक गतिविधि धानिएको छ। तसर्थ, रेमिट्यान्स यस्तो आयातमुखि अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो भनेर निसंकोचभन्दा आपत्ति हँुदैन। यसरी हेर्दा रेमिट्यान्स दशैँ मनाउन मात्र उपयोगी छैन समग्र देशको अर्थतन्त्रमा यसको गर्भिलो उपस्थिति छ।
आन्तरिक उत्पादनका क्षेत्रमा रेमिट्यान्सलाई आकर्षित गर्न नसक्दा आयतमुखि अर्थतन्त्रमाथिको निर्भरता अनुकुल बन्दै गएको हो। दीर्घकालीन अर्थतन्त्रको नेतृत्व गर्ने क्षेत्र कृषि, जलविद्युत र पर्यटनको प्रवद्र्धनमा शिथिलता उत्पन्न हुँदा स्वाभाविक रुपमा युवाको विदेश मोह वाध्यकारी मानिन्छ। देशका झन्डै ४० लाख यस्तै युवा प्रवासिएका छन्। तीनका आश्रितले पर्व विशेषमा रेमिट्यान्समा आँखा लगाउनु अस्वाभाविक होईन।
अमानवीय क्रियाकलापको दानवलाई बध गरेपछि रामलाई भगवानको रुपमा स्वीकार गरिएको हो। महिषासुर राक्षसको बधको खुशीयालीमा दुर्गा भवानीले आह्वान गरेको उत्सव विजयादशमीलाई हामीले अनादिकालदेखि ‘जयन्ती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवाधात्रृ स्वाहा स्वधा नमस्तुते’ भन्ने संङ्कीर्तनका साथ बडादशैंको रुपमा मनाउँदै आएका छौं। यी दुवै सन्दर्भ कृत्रिम अप्ठ्यारोको समयमा परेको यो दशैँसँग जोडिएका छन्। तसर्थ, दशैं आफैमा परम्परागत साँस्कृतिक मान्यता हो।
परनिर्भरताको पराकाष्ट यहाँभन्दा अन्यत्र खोज्नु पर्दैन। यस्तो परनिर्भरताले विस्तारै राज्यका नागरिकलाई परम्परागत मान्यता र अनुशासन कायम राख्न समेत कठिन तुल्याउने छ। परम्परागत मान्यताको संरक्षण कुनै पनि सफल राष्ट्रका अमुल्य नीधि हुन्। यसलाई ख्याल गरौँ, परनिर्भरताले हाम्रा घरघरमा मात्र होईन पर्व पर्वमा समेत अप्ठ्यारो पारेको छ। जुन, रेमिट्यान्स आश्रित अर्थतन्त्रले अव थेगिने अवस्थामा छैन।
प्रकाशित मिति: शनिबार, आश्विन ३०, २०७२ १७:५५:२२